Biriyoni rimwe chete reMadhora eYouTube? Pamwe. | Martech Zone
Svondo, October 1, 2006 Svondo, October 1, 2006 Douglas Karr
Pane zvakawanda zvekutaura nezve mabhiriyoni emadhora ari kukurukurwa uye kupfuurwa kutenderera maererano nekutengesa kweYouTube, MySpace, Facebook, nezvimwe. Mark Cuban ane waiti moron chete ndiyo yaizobhadhara iyo yakawanda kune Youtube. Ndine chokwadi kana tikakwanisa kudzoreredza nguva, vanhu vazhinji vangave vachishamisika kuti sei VaCuba vakaita mari yakawanda sezvavakaita kumashure muDot Com bust. Ndakamunzwa achishevedzwa kuti 'netsaona miriyoni' uye ndinofunga inogona kukwana. Ndakaverenga zvakati wandei bhurogu yake uye yakafanana nekuverenga musikana wemakore gumi nemaviri MySpace. Iye akati, iye ndokuti, blah, blah, blah.
Iyo Dot Com boom uye bust yaive kukundikana kwakakodzera kwakasimudza tekinoroji uye webhu kune yayo hupfumi. Yakawanda yemari yakatambiswa yaingova yekutsvaga yakanaka bhizinesi modhi. Kunyangwe ichiri kusarongedzwa, bhizinesi modhi iri kutanga kuumbwa.
Ndanga ndiri mutsoropodzi mukuru wekuyera 'eyeballs' asi zvinoita sekunge ndizvo zvazviri nezve iyi nyowani hupfumi hwewebhu. YouTube haisi kutengwa yezviri mukati kana tekinoroji - iri kuongororwa padanho repamusoro nekuda kwenhamba yevateereri vateereri yainayo. Kana bhiriyoni remadhora rakawandisa kune Youtube, nei zvingave zvakanaka kuti Ford itenge nemabhirioni mashoma? Ford haisi kuita purofiti chero… asi munhu wese anoziva kuti yakakosha. Nehurombo, kana Youtube ikatengwa nesimba guru reInternet… inowedzera akawanda e 'eyeballs' kune yavo brand.
Izvo zvinodaidzwa Kugovana kweMusika.
Uye isu tave kutanga kuona kutanga kweMusika Mugove uchitora chimiro pawebhu. Google, Yahoo! uye Microsoft zvese zviri kutsvaga nekutenga Mugove Mugovera. Semagumo, ani saiti ine yakakura kwazvo vateereri chinhu chakanangana nechero ipi TV kana Chiteshi cheRadio chiri chinangwa kana vaine vateereri vakawanda. Kunyangwe iyo mari iripo parizvino… vateereri vazhinji vaunogona kutenga nhasi vachabhadhara mukushambadzira mari mangwana. Iyo yechinyakare modhi inoshanda pamwe nemamwe midhiya mamodheru - mapepanhau muenzaniso wakanaka. Mari yakawandisa inogadzirwa neyekunyorera mune yekushambadzira mari pane yemunyoreri mari.
Ini ndichiri ndisina chokwadi chaizvo bhizinesi modhi re'kutenga mboni dzemaziso 'yakanaka kune indasitiri yeInternet, zvakadaro. Ini ndinofunga isu tichafanirwa kumirira kuti tione.
Target, Ndokumbirawo muvharire iyo Masutu ehuku